နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ စတင်ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဌမအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ခေတ္တရပ်နားစဉ် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ ပါတီစွဲစိတ်မျိုး မထားရှိဘဲ ပြည်သူ့ကောင်းကျိုးအတွက် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဌမအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမရက်က အစည်းအဝေး ခေတ္တရပ်နားစဉ် မှာ ကော့မှုးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်။
"အလုပ်ကို အခြေခံရမယ်၊မှုကို အခြေမခံရဘူး။အဲတော့ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ ပါတီတစ်ခုရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးဟာ တစ်ပုံစံတည်း မဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကလည်း မတူဘူး။သူတို့ရဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာဟာလည်း မတူဘူး။အဖြစ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းပဲ။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ အခါမှာ ပြည်သူ့အကျိုးအတွက်တော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။အန်တီဒီလိုပဲ မြင်တယ်။ဒါကြောင့် သိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တာတို့၊ဆန္ဒစွဲတို့ ဒေါသစွဲတို့ အဲဒီဟာတွေမရှိဘဲနဲ့ ပြည်သူအတွက် ဘာအကျိုးရှိမလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး လုပ်ရမယ်"
သတင်းထောက်တွေ မေးမြန်းတာတွေကို အချိန်ယူ ဖြေကြားပေးရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း(၃) ပုဒ်မ ၅၉ ၊ပုဒ်မခွဲ(စ)မှာ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ဥပဒေပါ အချက်အလက်တွေဟာ တဦးတယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီး တမင် ထည့်သွင်းထားတာလို့ ယူဆကြောင်း ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုကို အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီလို အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ က လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အပေါ်မှာလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အမြင်တွေကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း အသေးစိတ်ကို RFA သတင်းထောက် ကိုဝင်းနောင်တိုးက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
She should change her "noble prize" to "bubble prize" I am so sick and tired of her speech. Nothing much action. I think she should retire and stay at nursing home.
Jan 11, 2013 01:10 AM
If DASSK will beapresident of Burma one day ,economy of our country will develop.But ,she will use principle of Bamar lu myo gyi wa dah.Her face is hard and strong for ethnics.Make sure will be correct for the future of Burma.Please remind our ethnics.
Jan 10, 2013 04:52 PM
We must protect without Daw Suu our wright.We no need more. Now is simply she do only for her burmese peoples rights.We no need more.Why she is silent in kachin war.I dot not care her.
Dear Burmese people The Peace neve come to you because there are still Burmese military hold power. They are no good people their leaders only teach them such bad things.
Jan 10, 2013 05:37 AM
နေရပ်- RASU) (
U Thein Sein, Thura U Shwe Mann, U Htay Oo, General Min Aung Hlaing, General Ko Ko and U Khin Aung Myint, you all are respectable ex. army generals and MEN. Daw Aung San Suu Kyi is WOMAN and top of the Burmese democracy leader in Burma and in the world. Although Daw Suu is WOMAN, she doesn't afraid everything. You,6army generals afraid Daw Suu. Then, all of you shouldn't BULLY to Daw Suu about post of President in 2015. You all need to be honest, clean and abstain from all WICKED ideas at the 2008 constitution. She is honest and qualified leader.
Jan 10, 2013 04:31 AM